Ny batisa araka ny Tenin'Andriamanitra
Efesiana 6:13 sy 17 "Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian’Andriamanitra, mba hahazoanareo hanohitra amin’ny andro mahory ; ary rehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra hianareo."
17 "Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin’ Andriamanitra ho sabatry ny Fanahy;"
Hebreo 6:1-2 "Koa aoka hilaozantsika ny abidim-pianarana ny amin’ i Kristy, fa aoka handroso ho amin’ ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray, dia fibebahana hahafahana amin’ ny asa maty sy finoana an’ Andriamanitra, ary fampianarana ny amin’ ny fisasana maro sy ny fametrahan-tanana, ary ny fitsanganan’ ny maty sy ny fitsarana mandrakizay."
Ezahana eto amin'ity fikambanana ity ny mampianatra ny ambaran'ny Soratra Masina eo ambany fitarihan'ny Fanahy Masina.
Misy dingana tsy maintsy arahan'ny krisiana ary tsy maintsy fantany tsara eo amin'ny fiainana.
"... ny fisasana maro" na "différents baptêmes" amin'ny teny frantsay, izany hoe ny batisa. Atahoran'ny olona ny miresaka azy io satria mampisaraka hono. Raha ny Hebreo 6 nefa no jerena dia tsy mampisaraka velively izany.
Hiresaka ny atao hoe batisan'ny fibebahana isika androany.
Inona ny atao hoe batisa ?
Jereo ny tantaran'ilay lehilahy Etiopiana ao amin'ny Asan'ny Apostoly toko 8.
Jereo ihany koa ny tantaran'i Jaona mpanao batisa, ao amin'ny Matio 3:6 "ka nataony batisa tao amin’ ny ony Jordana ireny, rehefa niaiky ny fahotany."
Raha tena ny Tenin'Andriamanitra no jerena, dia olona miaiky ny fahotany sy manaiky an'i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy no atao batisa (jereo ilay Etiopiana). Olona manaiky hamoa voa mendrika ny fibebahana (Matio 3:8) ihany koa. Dingana ihany nefa ny batisa fa tsy tanjona, ary tsy mahavonjy.
Romana 6:3-4 "Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin’i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin’ny fahafatesany ? Koa niara-nalevina taminy tamin’ny batisa ho amin’ ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an’i Kristy tamin’ny maty tamin’ny voninahitry ny Ray no handehanantsika kosa amin’ny fiainam-baovao." Tandindon'ny fahafatesan'i Kristy ny batisa. Tsy maintsy nandalo fahafatesana i Jesosy Kristy mba hanapotehana ny asan'ny nofo, mba tsy hanan-kery intsony ny ota. Ny batisa izany dia fanapotehana na fandevenana ny ota mba tsy hanan-kery. Rehefa vita batisa dia tokony ho levona ny toetra teo aloha, tokony maty amin'ny nofo satria "Koa raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy ; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo." 2 Korintiana 5:17.
Ilaina ve ny batisa ?
Ilaina ny batisa raha mbola mitohy ny hazakazaka , mba ho porofo fa efa maty ny olona na ny toetra teo aloha. Averina indray fa tsy foto-pampianarana akory ny batisa fa abidiam-pianarana, ary tsy mampisaratsaraka izany ny batisa raha ny Tenin'Andriamanitra no ivelomana. Hoy Jesosy tamin'ilay jiolahy teo ankavanany: "Lazaiko aminao marina tokoa: Anio no hihaonanao amiko any Paradisa." (Lioka 23:43) Tsy nisy resaka batisa nefa teo. Noho izany tsy mahavonjy ny batisa fa manampy kosa amin'ny hazakazaka izay atao.